သဘာဝကျကျစိုက်ပျိုနည်း အပိုင်း ၁ (update) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » သဘာဝကျကျစိုက်ပျိုနည်း အပိုင်း ၁ (update)
သဘာဝကျကျစိုက်ပျိုနည်း အပိုင်း ၁ (update)
Posted by Wai Aung Chan Myo on Mar 31, 2012 in Know-How, DIY |4comments
လွန်ခဲ့သောနှစ်၆၀ကျော်မှစ၍ ခေတ်ပေါ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုစနစ်တွင် သီးနှံအထွက်တိုးစေ ရန်အတွက် အစိမ်းရောင်တော်လှန်ရေး (Green Revolution)ကို ဆောင်ရွက်လာရာ တောင်သူဦးကြီးများသည် ဓာတ်မြေသြဇာများ၊ ဓါတုပိုးသတ်ဆေးများကို အလွန်အကျွံအသုံးပြုလာရာ သီးနှံအထွက်နှုန်းများသိသိသာသာပိုထွက်လာပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ နှစ်ကြာရှည်စွာ တစ်စတစ်စသုံးစွဲလာမှုကြောင့် မြေဆီလွှာများပျက်စီးသွားခြင်း၊ သဘာဝဂေဟစနစ်ပျက်စီးသွားခြင်း၊ ဓါတုပိုးသတ်ဆေးဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် အဖျက်ပိုးများ များပြားလာခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပွားခဲ့ရပါသည်။
ယင်းကဲ့သို့ သီးနှံများတွင် ဓါတုပစ္စည်းများအလွန်အကျွန်သုံးစွဲခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် မှန်ကန်မှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် မြေထဲတွင်နေသော အကျိုးပြုအဏုဇီဝပိုးများ သေကြေပျက်စီး ကာ ပမာဏလျော့နည်းလာခဲ့သည်။ တောင်သူများအနေဖြင့် အဏုဇီဝပိုးများအလုပ်လုပ်ပုံကို ကောင်းစွာမသိသေးသောကြောင့် ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် ဓါတုပိုးသတ်ဆေးများကို လွဲမှားစွာ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ဘက်တီးရီးယားများသည် မြေထဲရှိအာဟာရဓါတ်များ အပင်မှအဆင်သင့် စုပ်ယူနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရုံသာမက အပင်မှလိုအပ်သော နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်၊ ဖော့စ်ဖရပ်စ်ဓါတ်၊ ပိုတက်စီယမ်ဓါတ်များကိုပါ မြေတွင်ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ထို့ပြင် မြေကြီးမှ စွန့်ထုတ်သော ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ၄၀%ကို ဘက်တီးရီးယား အများစုက စုပ်ယူထားနိုင်သည်။ ယင်းတို့မှ ထုတ်လုပ်သော မြေဆွေးဓါတ်သည် မူရင်းမြေဆွေးထက် ရာသီဥတုဒဏ်ကို ခံနိုင်ပြီ မြေထဲတွင် ကြာရှည်စွာထ်ိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် အဏုဇီဝသက်ရှိများ၏ အရေအတွက်ကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဘက်တီရီးယားများကဲ့သို မြေတွင်းရှိကောင်းကျိုးပြု ဖန်ဂျိုင်းများသည်လည်း ဖြိုခွဲရန်ခက်ခဲသော မြေဆွေးဓါတ်များကို အပင်မှစားသုံးနိုင်သောအဆင့်ရရန် ဖြိုခွဲပေးခြင်း၊ အပင်မှ စားသုံးပြီးကျန်ရှိသော အာဟာရဓါတ်များကို မြေထဲတွင် ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း နှင့် ယင်းတို့မှ စွန့်ထုတ်သောမြေဆွေးဓါတ်များကိုလည်း အခြားအဏုဇီဝသက်ရှိများက စာသုံးနိုင်ခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။
ပရိုတိုဇိုးဝါးများသည် ဘက်တီးရီးယားများကို စားသောက်သာ အဏုဇီဝဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အတွက် လိုအပ်သော နိုက်ထရိုဂျင်ပမာဏမှာ ဘက်တီးရီးယားအတွက် လိုအပ်သော ပမာဏထက် ၁၀ဆခန့်နည်းပါးသောကြောင့် စားသောက်ပြီးပိုသော နိုက်ထရိုဂျင်များကို အပင်မှ စားသုံးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အပင်များမှ စားသောက်သော နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်ပမာဏများ၏ ၄၀%​ ~ ၈၀%သည် ပရိုတိုဇိုးဝါးများက ဘက်တီးရီးယားများကို စားသောက်ပြီး ရရှိလာသောနိုက်ထရိုဂျင်များဖြစ်ပါသည်။
၄) အကျိုးပြု နီမတုတ်များ
အကျိုးပြု နီမတုတ်များသည် ဘက်တီးရီးယား၊ ဖန်ဂျိုင်း နှင့် ပရိုတိုဇိုးဝါးများကို စားသုံးသော အဏုဇီဝသက်ရှိဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ နိုက်ထရိုဂျင်စားသုံးမှုသည် ဘက်တီးရီးယားများထက် အဆ ၁၀၀၊ ပရိုတိုဇိုးဝါးများထက် ၁၀ဆ လျော့နည်းမှုကြောင့် ယင်း ဘက်တီးရီးယား၊ ဖန်ဂျိုင်းနှင့် ပရိုတိုဇိုးဝါးများကို စားသောက်ပြီး ပိုသောနိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်များကို အပင်မှ စားသုံးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တီကောင်များသည်လည်း ဘက်တီးရီးယားများ၊ ဖန်ဂျိုင်းများကို စားသောက်ပြီး အသက်ရှင် နေထိုင်သော သက်ရှိများဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အမြစ်များဆီသို့ ရေရောက်ရှိမှုကို အားပေးရုံသာမက လေရှုဘက်တီးရီးယားများရှင်သန်ရေးအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော အောက်ဆီဂျင်ကိုလည်း မြေကြီးအတွင်း တည်ရှိစေရန် ပြုလုပ်ပေးသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့၏သွားလာမှုကြောင့် ဖြစ်တည်လာသော လှိုင်ခေါင်းများသည် မြေဆီလွှာဖွဲ့စည်းမှု အားကောင်းစေပါသည်။ တီကောင်များမှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော တီကျစ်စာများသည် သာမန်မြေဆီလွှာထက် နိုက်ထရိုဂျင် ပါဝင်မှု ၄ဆ ခန့် မြင့်မားသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအောင်မြင်မှုတွင် လွန်စွာ အရေးပါသော မြေသြဇာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
မျှော်နေတာ ကြာပြီ … တညင်၊ ကျောက်တန်းဘက် ရောက်တဲ့ အခါ ၀င် လေ့လာ ချင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ် လေး mgyinaung@gmail.com ကို ပို့ပေးပါလားခင်ဗျာ…. ကျွန်တော် အမှတ်မမှားဘူးဆို .. အစ်ကို့ ခြံ ဖုန်းနဲ့ လိပ်စာ ကို post တစ်ခု မှာ ရေးဖူးသလားလို့ပါ။ ပြန်ရှာရတာ .. ခက်တာကြောင့် … နားလည် ပေးပါဗျို့  ….။
ထပ်ပို့ပေးလိုက်ပ့ါမယ်။ လေ့လာတာကတော့ အချိန်မရွေးလာခဲ့လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်က စနေ၊ တနင်္ဂနွေနဲ့ အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာပဲ ရှိတယ်ဗျ။
ကျန်ရက်တွေက ည ၆နာရီကျော်မှ ခြံပြန်ရောက်တယ်လေ။
လာမယ့် သင်္ကြန်မတိုင်မီ ၇ရက်ကနေ ၂၂ရက်အထိ ရုံးပိတ်တဲ့အတွက် ကျနော်အားတယ်။
ဲခြံထဲမှာရှိမယ်။ ကျနော်နဲ့တွေ့ရင်တော့ လိုအပ်တာ သိချင်တာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရတာပေ့ါ။
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ- အမှတ်(၁၅၃၆)၊ ထူပါရုံ (၁၆)လမ်းအရှေ့၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ခြံလိပ်စာ- ၊ သန်လျင်-ကျောက်တန်းကားလမ်းဘေး(ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးဝင်းအနီး)၊ ပျဉ်ထောင်းချောင်းရွာ၊ နတ်စင်ကုန်း မှတ်တိုင် (ကျိုက်ခေါက်ဘုရားမှ ၆မှတ်တိုင်မြောက်)တွင်ဆင်း၍၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဂိတ်တွင် သစ်မွှေးခြံကို ပို့ပေးပါဆိုရင်……
Ph: 0949348896, 0973070035, 095136753, 0949275907.
email address: waiaungchanmyo@gmail.com.
ကိုတာထက်ကျော်ပြီး.. ၄ပု့ဒ်တင်ထားတဲ့အတွက်.. ၂ရက်နေ့အထိ.. အသစ်တင်လို့မရပါဘူး..
နောက်တင်ရင်.. Category > Know How ရွေးပါနော..။ ဒါမှမဟုတ်ရင်.. Front Page မှာပေါ်မှာမဟုတ်သလို.. ပွိုင့်လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး..။
အခုလို သတိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ
နောက် သတိထားပြီး တင်ပါ့မယ်။
ကျနော်က အချိန်မရတာတကြောင်း၊ ပို့စ်ကို အိမ်မှာရေးပြီး ရုံးရောက်မှ တင်ရတာကတကြောင်း မို့လို့ပါ။